2lọ ọrụ China 2-Ply House Wrap na ndị na-emepụta | ShiningPlast
Uragba ume na ume iku ume bụ ihe nnọchianya kacha mkpa maka ShiningWrap.
Ibu ibu: 55 ~ 75 gsm
Ihe: PP / PE
Usoro 2 akwa: LDPP + HDPP ma ọ bụ LDPE + HDPE
Ọnọdụ mkpuchi: Mmiri jet loom ma ọ bụ okirikiri loom
Agba: Na-acha ọcha ma ọ bụ dịka onye na-arịọ arịrịọ.
Obibi akwụkwọ: E biri ebi akwụkwọ ruru anọ
: Onwe onye na akwado onwe ya di
PP / PE kpara ShiningWrap na-egbochi mgbidi megide ihu igwe adịghị mma, mildew. Ọ na-egbochi mmiri, na-arụ ọrụ nke ọma, yana nke ukwuu. Na-ewu ụlọ, ikuku na udu mmiri agaghị amachapụ. Shining Coconutst Housewarp bụ ihe na-adịgide adịgide, nke na-egbochi mmiri, na-egbochi ihu igwe nke na-egbochi mmiri, ebu na-abanye n'ime ma na-enye ohere ka ikuku mmiri si n'èzí.
Site na mkpochapụ, anyị na-elekọta nke ọma nke obere shingle ọ bụla site na ị na-elele eserese / ihe na-abanye n'oge gara aga na njikarịcha.
N'ịbụ ndị nwere nnukwu ịsa ahụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ajị anụ na -eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma tupu ọ banye na mmiri mgbe a na-eme DIE. Ka ọ dị ugbu a, sistemụ ndozi ndozi na-eme ka ihu sie ike mgbe ịchachara. Ọbụghị naanị ezigbo ihe eji emebi emebi kamakwa akụrụngwa ka mma.
Ezigbo imebi na-ejide n'aka na oke iku ume na-abịa mgbe emesịrị.
Ihe ngwungwu oge
1. ightkwụ siri ike na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ PP na ike (Platts pallets)
2. palletization pụrụ iche echepụtara (US ma ọ bụ EN Standard Flat Pallets Ma ọ bụ Crate Pallets).
·Na-adigide: ShiningWrap bụ akwa / Siri ike / Nke na-adigide nke abụọ na mgbochi ihu igwe na-egbochi. Ebe ọ bụ na anyị ji nlezianya na-elekọta yarn ahụ n'oge mbibi. Ike ya siri ike na-amalite site mgbe ahụ. Gbakwunyere ikike ịsa ahụ elu na teknụzụ mkpuchi, akwa ahụ na-abụ ezigbo ike ruo mgbe ọ na-eru gị aka.
·Dị fechaa: Shiningwrap nwere ngwongwo dị fechaa nke na-eme ka ọ dị mfe iburu na ịwụnye.
· Permeable / Micro-Perforated: Usoro ikpo ọkụ ga - agba mbọ hụ na ShiningWrap na - enye ohere ufe ọkụ ọzọ pụọ n'ime ụlọ iji gbochie mildew mmiri na - akpata.
·Na-eguzogide Weather: Ebe ọ bụ na mmalite nke yarn extrusion, anyị na-amalite ilekọta ụmụ nwanyị ọ bụla site na nnukwu annealing na ịbịaru oke, anyị na-ejikwa ha site na looms dị elu, site na T-Die Coating ruo mgbe ọ gwụchara, na ihe a niile ga-ahụ na ọ dị mma ịkwatu ọnọdụ. , ezigbo tensile / akwa na mbibi dị mma. A ga-enyocha nchekwa nke ndị na - ewepụ ihe dị iche iche ọbụlagodi n’oge oke ikuku ma ọ bụ ajọ ihu igwe.
·Nnweta Onwe Onye:
Gluu na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na azụ azụ na-enye ndị ahịa anyị nhọrọ ọzọ nke bụ ọrụ na-ejikọ onwe ya. Ọ ga - enyere aka imechi ụlọ ka ọ dị ọbụlagodi mgbe oke ikuku na oke mmiri na - ebugharị n'oge owuwu. Ọzọkwa, ọ na-enyere onye ọrụ aka ịwụnye ya ngwa ngwa.
·Gosi Gosi: Dịka isi dị oke mkpa, ike dọkpụrụ adọka (nnukwu mbibi akwa kwa mgbe arụnyere ime ihe ike) kwesịrị ka ndị ụlọ ọrụ anyị dị elu na teknụzụ mmepụta dị elu ga-elele ndị ọrụ kachasị mkpa anya.
·Mgbapụta mmiri: N'adịghị ka ndị na-ejikọ ọnụ, ihe na-emebi emebi na-akpata ọtụtụ oghere na oghere n'etiti teepu. Shiningwrap nwere ezigbo ịkpa akwa na-eme ka inch ọ bụla nke akwa ahụ na-aga mmiri.
·UV na-eguzogide: Anyị jiri ọgwụgwọ UV na njigide ya kachasị mma iji hụ na njigide ahụ n'oge ekpughere ogologo oge UV ma ọ bụ na-ewu ụlọ ogologo oge.
Nke gara aga: 3-Ply Synthetic Roofing Roolaying
Osote: Ihe Mgbo Na-Ewu Egwu